Mutsva muunganidzwa wemabhande ezhizha reApple Watch | Ndinobva mac
Mutsva mutsva weApple Watch zhizha mabhendi
Mumashoko ezuro ezuro, vakomana veCupertino vakapererwa nenguva yekuburitsa dzimwe nhau dzakanangana nemidziyo yavo, senge itsva iPad Pro makesi uye muunganidzwa mutsva wemabhande eApple Watch, mabhanhire akafuridzirwa nezhizha. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti muWWDC Apple yakanga isina kuratidza michina mitsva yakawanda nekugadzirisa kwenguva yakareba, izvo zvakakonzera kuti nguva yacho iwedzerwe kusvika angangoita maawa maviri nehafu, uye izvo zvakatanga neinenge maminetsi gumi ekunonoka purogiramu yakarongwa.
Matambo matsva eApple Watch ayo ave kuwanikwa kuti atenge akagadzirwa ne fluoroelastomer, izvo zvinoshandiswa mumabhande emitambo, uye anowanikwa mumhute yebhuruu, mukume yero uye flamingo pink. Ose ane mutengo we59 euros. Kune vanoda tambo dzechinyakare, vakomana vanobva kuCupertino vakavhurawo tambo yakasungirwa nezuva-sunflower neyakajairika bhureki, tambo yakagadzirwa neganda inotengeswa pamamiriyoni zana nemakumi mashanu neshanu.
Iwo matsva mabhande emitambo yeNike akawedzerwawo kune yakafara katarogu yemabhanhire anowanikwa muApp Store. Kuti vapedze, vakomana vanobva kuCupertino vawedzera tambo iyo yakavhurwa mune yakatemwa edition muSan Francisco, tambo inonzi Pride Edition uye iyo inotitaridza iwo mavara eiyo ngochani mureza. Tambo iyi inogadzirwa nenyukoni yakarukwa uye inongowanikwa muzvitoro zvepamutemo zveApple. Tambo iyi inotemerwa pamakumi mashanu emaeuro, iwo mutengo mumwe chete watinogona kuwana tambo dzeyiloni idzo Apple inotipa muzvitoro zvayo.
Kunyangwe paine chokwadi chekuti tinogona kuwana huwandu hwakawanda hwezvisungo zvisiri pamusika, Apple yakashandura mabhande eApple Watch kuva imwe yeiri kuwana mari zhinji mumwedzi ichangopfuura, nekuda kwetambo itsva dzinoramba dzichiwanikwa. kuvhura pamusika uye nevashandisi vanogona kugadzirisa zvigadzirwa zvavo zvinoenderana nezvinodiwa, zvido, zvavanofarira ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Mutsva mutsva weApple Watch zhizha mabhendi
Kwete, iyo YeMicrosoft Khibhodi, Magic Trackpad uye Magic Mouse pane nyowani iMac Pro haitengeswe zvakasiyana.
Vhidhiyo yakazara yezuro yezuro inokosha yave kuwanikwa paApple webhusaiti